नेकपा विवाद : सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी कार्यक्रममा ओली पक्षको अवरोध ! « Nagarik Khabar
नेकपा विवाद : सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी कार्यक्रममा ओली पक्षको अवरोध !
प्रकाशित मिति : 21 November, 2020 4:11 pm
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । चितवनमा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी कार्यक्रम प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेता-कार्यकर्ताले अवरोध गरेका छन् ।
ओली पक्षका नेता कार्यकर्ताले नाराबाजी र होहल्लासहित केहीबेर कार्यक्रम अवरोध गरेका हुन् । राप्ती नगरपालिकाको वीरेन्द्र नगरमा आयोजना गरिएको कार्यकर्ता भेलामा सहभागी पाण्डेविरुद्ध ओली पक्षका स्थानीय नेता-कार्यकर्ताले होहल्ला र नाराबाजी गरेका हुन् ।
नेकपा राप्ती नगर कमिटीका अध्इक्ष इमानसिंह लामाले केही उच्छिङ्खल व्यक्तिले कार्यक्रम अवरोधको प्रयास गरेको बताए । अवरोध गर्नेमध्येका युवा संघका नेता केदार आचार्यले मदन भण्डारी फाउण्डेसनमार्फत गुटबन्दी भएको बताएपछि नाराबाजी गरिएको बताएका छन् ।
भक्तपुर । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले मध्यपुरथिमि नगरपालिका शङ्खधर चोकमा निर्माण गरिएको शङ्खधर सामुदायिक
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला हिंसा र अपराधका घटना दोहोरिन नदिनका लागि जनचेतना फैलाउन
निरा गौतम रुपन्देही । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद